UTevez usayinwe ngesizumbulu yiqembu laseChina | isiZulu
UTevez usayinwe ngesizumbulu yiqembu laseChina
Angase ohole kakhulu kunabo bonke ofunwa yiqembu laseChina
Umdlali usevikele isinqumo sikaLionel Messi
UTevez uzohola uR54m ngonyaka
Shanghai – Isikhwishikhwishi somdlali wase-Argentina, uCarlos Tevez, usebe ngumdlali wakamuva ukusayinwa ngesizumbulu semali njengoba esesayine neqembu laseChina, iShanghai Shenhua, ngokusho kwaleli qembu ngoLwesine.
Ukuthengwa kwalo mdlali oneminyaka engu-32 ubudala yiqembu yiBoca Juniors “kuzothuthukisa kakhulu” iShenhua phambili, ngokusho kwaleli qembu enkundleni yezokuxhumana eqinisekisiwe.
Leli qembu lichaze lo mdlali njengomgadli ovelele kunabo bonke emlandweni wase-Argentina laphinde lathi lilindele ukuthi alilekelele kakhulu ekugadleni.
OLUNYE UDABA: Angase ohole kakhulu kunabo bonke ofunwa yiqembu laseChina
Yize noma leli qembu lingadalulanga ukuthi lo mdlali uthengwe ngamalini kodwa abezindaba e-Argentine babika ukuthi uzothola u-$84 million eminyakeni emibili ngokwale nkontileka, nokuyimali esiphindeke kabili emalini abeyihola ngaphambilini.
Esitatatimendeni iBoca ibonge uTevez ngeqhaza lakhe kuleli qembu, njengoba evalele enetheni amagoli angu-25 emidlalweni engu-56 okubalwa namagoli amabili awashaya bedlala nezimbangi zabo ezinkulu, iRiver Plate.
Leli qembu lithi lo mdlali ushiye abalandeli baleli qembu nemizuzu abangasoze bayikhohlwa kanti futhi bayohlala njalo bephupha ngokubuya kwakhe.
Ukuya kwaTevez kuleli qembu laseChina kwandisa isibalo sabadlali baphesheya, ikakhulukazi abaseSouth America abaya kodlala eChina ngoba bethenjiswa izizumbulu zemali.
Inkakha yeBucs ibeka izizathu zokuthi kungani uJali kumele abuyele kwiPirates
Lowo owake wadlalela amaBhakabhaka uJoseph Ngake uthi u-Andile Jali kumele abuyele "ekhaya" ekilabhini abeyidlalela ngaphambi kokufudukela phesheya, i-Orlando Pirates.
Eksteen: Iyethusa indlela ashone ngayo uNtshangase
Umdlali wasesiswini kwiMaritzburg United uZiyaad Eksteen uthi indlela ashone ngayo uzakwabo uLuyanda Ntshangase ibe yibhadi futhi kayichazeki.
Akwaziwa ngekusasa likaBilliat
Umdlali odabuka eZimbabwe uKhama Billiat, okulindeleke ukuba ashiye iMamelodi Sundowns ekupheleni kwesizini, namanje akakacacisi ukuthi uzobe elihlikihla kuphi ngesizini ezayo.
Ucikwa ngamahlebezi okuthi uthandana noMroza uMjikijelwa.
Cpt: 10-19°C Pta: 9-24°C
Jhb: 7-20°C Bloem: 3-21°C
Dbn: 16-22°C PE: 10-21°C
Cresta - 18:13:52 PM TRAFFIC LIGHTS not working at Judges Avenue Ezinye zasemigwaqeni